Safari Technology Preview mbipute 138 weputara | Esi m mac
Otu ụdị ọzọ nke ihe nchọgharị nnwale Apple ruru ndị ọrụ etinyere ya na Mac ha, ụdị ọhụrụ ewepụtara bụ 138 yana, dị ka ọ na-adịkarị, ọ na-edozi ụfọdụ mperi ma na-agbakwụnye nkwalite nchekwa nke ha na-emekarị. Ụdị ihe nchọgharị ọhụrụ a na-abịa otu ọnwa ka ahapụchara ụdị 137, Apple oge a agbatịla ntọhapụ n'etiti nsụgharị n'ihi ezumike ekeresimesi.
Teknụzụ Safari 138 dabere na mmelite Safari 15 ọhụrụ agụnyere na beta ọhụrụ Monterey beta nke macOS, yabụ ọ gụnyere ụfọdụ atụmatụ ya dịka ogwe taabụ dị mfe yana nkwado maka otu taabụ yana nkwado ka mma maka mgbakwunye Safari.
Mmelite ọhụrụ a dị site na ngalaba Nwelite ngwanrọ n'ime Mmasị sistemụ, ma ọ bụrụhaala na ibudatara nke gara aga nke ihe nchọgharị nnwale a. Iji jiri ihe nchọgharị a, ọ dịghị mkpa ịnweta akaụntụ onye nrụpụta yana ọ na -arụ ọrụ iche na onwe ya site na ụdị Safari arụnyere na kọmputa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » Amalitere usoro 138 nke Safari Technology Preview